Natao androany, sabotsy 25 janoary teo amin’ny « parvis » Analakely ny lanonana ara-miaramila famindrampahefana teo amin’ny vondrona Polisy Monisipaly sy ny Mpamonjy voina ho an’ny Antananarivo Renivohitra. Ny Commissaire Principal de Police Ostrom Whenss, manomboka izao no lehiben'ny Polisy Monisipaly, ary ny Lieutenant Colonel Razafimanahaka Tiana no lehiben'ny vondrona Mpamonjy Voina Nilaza ny Ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina fa hanampy azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asa, indrindra ara-pitaovana. « Ho hentitra aho amin'ny tsy fanarahan-dalàna », hoy izy. (Jereo Sary Tohiny)
Manatanteraka voin-kava mahatratra ny Faritra Mahatsiatra Ambony, ho firaisam-po sy tolo-tanana hanampiana ireo mpiray tanindrazana tena voa mafy any amin’ny Faritra rahavavy niharam-pahavoazana vokatry ny andro ratsy izay mandalo eto Madagasikara. Nanomboka androany ny hetsika ary hitohy tsy tapaka hatramin’ny Alatsinainy 27 janoary 2020 tolakandro, ka anentanan-dRazafindrafito Lova Paupil, Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ny fiaraha-mientan’ny rehetra na sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana.
Tonga nijery ireo traboina tao amin'ny fokontany Tsaramasay, Boriboritany fahatelo Antananarivo Renivohitra, androany alakamisy 23 janoary 2020, ny Minisitry ny Mponina Naharimamy Lucien Irmah, nitarika ny solontenam-panjakana. Nanolotra vary sy voamaina ary trano lay miisa enina ho an’ireo traboina. Nanamafy ny Minisitra Naharimamy Lucien Irmah fa ho fiatrehana ny mety ho loza vokatry ny toetr'andro ratsy izao fidinana ifotony izao. (Jereo Sary Tohiny)
24/100 ny naotin’i Madagasikara mikasika ny ady amin’ny kolikoly ho an’ny taona 2019, araka ny tatitra nataon’ny Transparency International androany, ka mametraka azy amin’ny laharana faha-158 amin’ny firenena miisa 180 nanaovana fanadihadiana manerantany. Very isa i Madagasikara miohatra ny tamin’ny taona 2018, izay 25/100 ny naoty nametraka an’i Madagasikara teo amin’ny laharana 152 maneran-tany. Nanao fanamby ity fitondrana ity vao nijoro fa hiady amin’ny kolikoly ary tsy misy indra fo amin’ireo izay tratra manao izany.
jeudi, 23 janvier 2020 14:33
Sambava: Zaza iharan’ny herisetra ataon’ny mpampianatra mitaiza azy nefa anabavin-drainy
Tovolahy kely, 11 taona, izay zanak’anadahiny no iharan’ny herisetra ataon’ity vehivavy, mpampianatra amina sekotsy miankina iray eto Sambava. Manan-janaka roa ilay madama, miara-tezainy amin’ity zanak’anadahiny ity. Mamela ratra sy holatra amin’ny sofina roa an’ilay zazalahy, araka ny hita amin’ny sary, ny herisetra mihatra aminy. Raha ny fijoroana vavolombelona ataon'ny mpiara-monina dia miaritra ny hirifiry ity zaza ity, iharan’ny vely kifafa, ary tsy manana zo hilalao toy ny ankizy rehetra. Sarotra amin'ny fiara-monina anefa ny miditra satria olona manana ny maha izy azy ity renim-pianakaviana ity. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 23 janvier 2020 12:28
Fitadiavana asa: Very hevitra ireo tanora
Vao misy antso ataon'ny orinasa mila mpiasa, dia amin'arivony ireo tanora miazakazaka milahatra hitondra ny CV hitady asa. Maro ny miverim-potsiny, kivy tsy mahita ny lalan-kalehy intsony. Misy ireo mivarilavo, mivaro-tena ahitana izay arapaka, na ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo aza dia voatery mivaro-tena ny sasany, tsy fantatry ny ray aman-dreny akory, misy ireo mpianatra CEG na lycée, izay misy aza ireo olona ambony mpitondra no manararoatra izany fahalemena izany. Sahirana ny orinasa ankehitriny, ka na napetraky ny fanjakana aza ny karama farany ambany 200 000ar, dia vitsy ny manaja izany. Ireo orinasa mpanao informatique, na mpanao saisie aza, dia matetika atao asa any an-trano, ka samy miantoka ny ordinateur, ny connexion, ny Jirama, ny hofan-trano, fa dia raisina toy ny prestataire, izany hoe tsy mpiasa raikitra manana Cnaps sy Ostie, fa dia raisina ho mpiasa tena, ka dia takiana patanty. (Jereo Sary Tohiny)
"Contexte Par rapport au reste du pays, le sud de Madagascar connaît des sécheresses cycliques qui menacent la sécurité alimentaire des populations. De manière générale, les performances de l’agriculture malgache sont restées faibles en raison, principalement, des faibles rendements, du mauvais état des infrastructures de base et d’une insuffisance de crédit rural. Pour lever ces contraintes, le gouvernement a mis au point des politiques et stratégies sectorielles qui prévoient notamment la réhabilitation des périmètres irrigués tels que celui de Bas Mangoky. Le périmètre du Bas Mangoky se trouve dans le District de Morombe, dans la Région Sud-Ouest de Madagascar à 220 km au nord de la ville de Tuléar. Le périmètre est alimenté en eau par le fleuve Mangoky qui est le plus grand fleuve de Madagascar à travers une prise d’eau située à 20 km en amont de celui-ci. L’aménagement du périmètre a commencé dans les années soixante. Avant la réhabilitation, le périmètre du Bas Mangoky était géré par la société d’Etat Samangoky. Le périmètre du Bas Mangoky est actuellement le seul à Madagascar qui est équipé de canaux d’irrigation bétonnés et autoportés jusqu’au niveau des parcelles.
Antsirabe faharoa no nosafidian’ny ministeran’ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy nanaovana ny fambolen-kazo, ho fandraisan’anjara amin’ny famerenana indray ny ala eto Madagasikara, ka ny toeram-pambolena hazo tao Ankofana, Fokontany Antsampanimahazo, Kaominina Antsoantany no nanaovana izany androany alatsinainy 20 janoary 2020. Tonga taty an-toerana ny Minisitra Naharimamy Lucien Irmah nitarika ny delegasiona avy any amin’ny faritra hafa toa an’i Bongolava sy Itasy, Analamanga sy Vakinankaratra. Nambaran’ny Minisitra fa ankoatry ny fametrahana ho lovan'ny taranaka ny voly hazo dia ho fanoloana ireo hazo ampiasaina amin’ny fanamboarana ireo trano ara-tsosialy izay haorina ao ao amin’ity Kaominina ity ihany koa izao fambolen-kazo izao.
Tombanana ho maherin’ny 12 000 ireo tonga teny Firarazana- Tampoketsa, Distrikan’Ankazobe androany tamin’ny fanombohana ofisialy ny taom-pambolenkazo 2020. Zanakazo manodidina ny 1 200 000 no novolena tamina velarantany 500 ha nandritra izany. Nandray anjara ny mpiasam-panjakana, ny avy amin’ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miombon'antoka, ny olon-tsotra, ny avy amin’ny Foloalindahy. Toy izany koa ny teny anivon’ny Faritra. Tanjona ny hambolena zanakazo 60 tapitrisa amin’ity taona hankalazana ny faha-60 taona niverenan’ny fahaleovantena ity. Nitarika izany teny an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny lehiben'ny Governemanta Ntsay Christian. Nosantarina teny Firarazana androany ny fampiasana ireo fomba moderina toa ny famafazana amin’ny alalan’ny fiaramanidina. (Jereo Sary Tohiny)
Homarihina rahampitso alahady 19 janoary ny fanombohan’ny taom-pambolenkazo taona 2020. Ho an'ny Faritra Atsinanana dia amina velaran-tany mirefy 778,7 hektara no hanaovana izany, manomboka any Marolambo hatrany Mahavelona Foulpointe, ary zanakazo 1 271 933 fototra no hovolena amin'izany. Mirefy 40ha kosa ho an'i Toamasina-I, ka hatao any Antetezana, 37km miala an'i Toamasina tampon-tanana, ka zanakazo 600 000 fototra no hovolena amin'izany. Misy ny tolo-tanana hanofàna fiara hitatitra ireo olona te andeha hamboly hazo any Antetezana tanterahina manoloana ny « Esplanade » lapan’ny tanànan’i Toamasina androany sabotsy tontolo andro. (Jereo Sary Tohiny)